ဘ၀နှင့်အချစ် Archives - CeleLove
ချစ်သူနဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့အခါ အစအဆုံး အဆင်ပြေပြီး အချစ်တွေ တိုးလာစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေကို မမေ့ပါနဲ့နော်
September 12, 2019 Cele Love 0
ချစ်သူနဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့အခါ အစအဆုံး အဆင်ပြေပြီး အချစ်တွေ တိုးလာစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေကို မမေ့ပါနဲ့နော် ချစ်သူနဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့အခါ အစအဆုံး အဆင်ပြေပြီး အချစ်တွေ တိုးလာစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေကို မမေ့ပါနဲ့နော်။ သေချာလေး သတိထားပေးဖို့ လိုပါတယ်နော် … ။ ချစ်သူလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ နှစ်ယောက်က ဒိတ်ကြတော့မယ်မလား၊ ချိန်းတွေ့တဲ့နေ့မှာ […]
ယောကျာ်းလေးတွေ ချစ်သူကို သတိရတဲ့အခါ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အရာ (၅)မျိုး
August 31, 2019 Cele Love 0
ယောကျာ်းလေးတွေ ချစ်သူကို သတိရတဲ့အခါ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အရာ (၅)မျိုး ယောက်ျားလေးတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကို ထုတ်ပြရမှာ ရှက်တတ်ကြပါတယ် … ။ သူတို့ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စကားတွေပြောလေ့မရှိဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင် သင့်ကို သတိရနေတယ်ဆိုတာတောင် မပြောတတ်ကြဘူး …. ။ သူတို့မာနထိခိုက်တယ်လို့ တွေးတတ်ကြတယ် …. ။ ဒါပေမယ့် […]
သင့်ကိုဆွဲစားဖို့ သက်သက်သာ လာတွဲနေတဲ့ ဘဲတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅)ချက်
August 30, 2019 Cele Love 0
သင့်ကိုဆွဲစားဖို့ သက်သက်သာ လာတွဲနေတဲ့ ဘဲတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅)ချက် ခုခေတ်မှာ တစ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတွေကို တဏှာစိတ်သက်သက်နဲ့သာ တွဲတတ်ကြပါတယ် ။ ဒီလိုယောက်ျားလေးတွေဟာ တကယ်ကို ယုတ်ညံ့ပြီး အောက်တန်းကျသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ပတ်သက်မ်ိနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အမြန်ဆုံး နောက်လှည့်သင့်ပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကို […]
” ဒီလိုအချက်တွေရှိတဲ့ မိန်းမမျိုးကို လုံးဝ မယူပါနဲ့ ”
” ဒီလိုအချက်တွေရှိတဲ့ မိန်းမမျိုးကို လုံးဝ မယူပါနဲ့ ” ပြဿ နာ တစ်ခုဖြစ်တိုင်း ယောက်ျားလေးတွေကိုပဲ အပြစ်တင်လို့ မရတဲ့ အခြေအနေတွေရှိပါတယ် ။ မိန်းမ တွေကြောင့်လည်း အမှားတွေဖြစ် တတ်ပါတယ် …။ လူတိုင်းအမှားနဲ့ မကင်းတာက သဘာဝမို့ အိမ် ထောင်ပြုဖုိ့ စဉ်းစားတော့မယ်ဆိုရင် […]
ခပ်ဆိုးဆိုးမိန်းကလေးတွေကိုမှ ယောကျာ်းလေးတွေအသည်းစွဲအောင် ချစ်မိနေရတဲ့အကြောင်းရင်း (၄) ချက်
August 28, 2019 Cele Love 0
ခပ်ဆိုးဆိုးမိန်းကလေးတွေကိုမှ ယောကျာ်းလေးတွေအသည်းစွဲအောင် ချစ်မိနေရတဲ့အကြောင်းရင်း (၄) ချက် ဖူးစာဆိုတာ တစ်ယောက်က အရပ်ရှည်သလို ၊ နောက်တစ်ယောက်က အရပ်ပုတာမျိုး ၊ တစ်ယောက်က ဆိုးရင် နောက်တစ်ယောက်က လိမ္မ်ာနေတာမျိုးပါ…ကိုယ့်နဲ့ဆန့်ကျင့်ဘက်အရာတွေနဲ့ တွေ့ရတတ်တာ သဘာဝပါ။ ယောကျာ်းလေးတွေက သူတို့အပေါ် ဆိုးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုဆို ဖျစ်ဖျစ်တုန်အောင်ကို သဘောကျတတ်ပါတယ်နော် … […]
အိမ်ထောင်မပြုခင် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အတူ လုပ်ဖူးထားသင့်တဲ့ အရာ (၄) ခု
August 27, 2019 Cele Love 0
အိမ်ထောင်မပြုခင် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အတူ လုပ်ဖူးထားသင့်တဲ့ အရာ (၄) ခု ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အတူ အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ထောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မှာ အရင်ဆုံး သူနဲ့အတူ ပြုလုပ်ဖူးသင့်တဲ့အရာတွေ ရှိနေပါတယ်။တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ဘာမှ ဂဃနဏမသိပဲ တွဲတာ လပိုင်းလောက်နဲ့ မင်္ဂလာခန်းမထဲ ဝင်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအိမ်ထောင်ဟာ နားလည်မှုပိုင်း အားနည်းနိုင်သလို၊ အိမ်ထောင်ရေး ပြသနာတွေလည်း ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ခုလို […]
ယောက်ျားလေးဘက်က သင့်အပေါ် အေးစက်မသွားစေချင်ရင် ဒီအချက်တွေ သိထားပါ
ယောက်ျားလေးဘက်က သင့်အပေါ် အေးစက်မသွားစေချင်ရင် ဒီအချက်တွေ သိထားပါ လူတစ်ယောက် အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို လွမ်းနေ၊သ တိရနေတာမျိုးကို မလိုချင်တဲ့သူမရှိပါဘူး။တစ်ချို့ ကိစ္စတွေဟာ ဒီတိုင်း သမရိုးကျနည်းအတိုင်း သွားတာထက် နည်း နည်းလေးဥာဏ် များပေး ဖို့ လိုပါတယ်။သူ့ကိုယ့်အကြောင်း မစဉ်း စားပဲ မနေနိုင်ပဲ လွမ်းနေအောင် […]
ချစ်သူတွေကြားမှာ ဘယ်လို စကားတွေ မပြောရဘူးလဲဆိုတာ ပြောပြပေးမယ်နော် …
August 26, 2019 Cele Love 0
ချစ်သူတွေကြားမှာ ဘယ်လို စကားတွေ မပြောရဘူးလဲဆိုတာ ပြောပြပေးမယ်နော် … ချစ်သူအချင်းချင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး ဘာကိုမှ မဖုံးကွယ်ဘဲ စကားပြောဆိုကြတာ ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီလို စကားတွေ ခဏခဏ ပြောနေတာကတော့ မကောင်းပါဘူး …။ စုံတွဲလေးတို့ရေ ချစ်သူဆိုတာ ကိုယ်တကယ့်ကို မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားတဲ့သူပဲ မဟုတ်လားနော်။ ဒီလိုမျိုး […]
ဒီလိုမျိူးချစ်သူကို တန်ဖိုးမထားတတ်ရင် ဝေးသွားမှ နောင်တအကြီးအကျယ်ရမှာပါ
August 24, 2019 Cele Love 0
ဒီလိုမျိူးချစ်သူကို တန်ဖိုးမထားတတ်ရင် ဝေးသွားမှ နောင်တအကြီးအကျယ်ရမှာပါ မိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်သူကို ချစ်တတ်တဲ့နေရာမှာ နှစ်ယောက်မရှိပါဘူး။ သူတို့ရဲ့အချစ်ဟာ တစ်ခါတလေ ချစ်သူကို မွန်းကြပ်စေလောက်တဲ့အထိတောင် ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုအရမ်းချစ်လို့ဆိုတာကို နားလည်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ဝေးသွားတဲ့အခါကျမှ အကြီးအကျယ်နောင်တတွေ တစ်လှေကြီးရရမှာပါနော် …. (၁) ခဏခဏဖုန်းဆက်တတ်တဲ့ချစ်သူ […]
သင့်ရဲ့ချစ်သူက သူ့အဆက်ဟောင်းကို မမေ့သေးဘူး ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ အချက်လေးများ
August 21, 2019 Cele Love 0
သင့်ရဲ့ချစ်သူက သူ့အဆက်ဟောင်းကို မမေ့သေးဘူး ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ အချက်လေးများ သင့်ရဲ့ချစ်သူ သူ့အဆက်ဟောင်းကို မမေ့သေးဘူး ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ အချက် ကိုယ်လက်ရှိ တွဲနေတဲ့ ရည်းစားက အရင်ရည်းစားကို မမေ့နိုင်သေးတာ တော်တ်ာကို ဆိုးရွားတဲ့ ခံစားချက်ပါပဲ …. ။ သူ့ရဲ့အဆက်ဟောင်းကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ သတိရနေရင် […]